FI Test – Gaming Kwee
36. New Founder Application
The Founder Institute သည် အိုင်ဒီယာအဆင့်သာရှိသေးသော လုပ်ငန်းများကို Startup တည်ထောင်နိုင်သည်အထိ ကူညီတွန်းအားပေးသည့် ကမ္ဘာကျော် အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခက်ခဲပြီး တိကျသေချာသော သင်ရိုးညွှန်းတန်းမှတဆင့် စတင်ကာစလုပ်ငန်းများ နှင့် လုပ်ငန်းရှင်များ ဖြစ်ရန် စိတ်အားထက်သန်နေသူများကို ဖွဲ့စည်းပုံများ၊ သင်တန်းများ၊ ပြည်တွင်း ပြည်ပ လမ်းညွှန်ဆရာများ၏ လမ်းညွှန်ပြသမှုများ တို့ကို သင်တန်းကာလအတွင်းသာမဟုတ်ပဲ အမြဲတန်းအတွက် ပေးအပ်နေပြီး ရေရှည်တည်တံ့သော ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် အကောင်းဆုံး ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် နေစဉ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသော စွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များကိုလည်း လက်ခံသည့်အပြင် ပါဝင်သူများကိုလည်း သာတူညီမျှခွဲဝေပေးခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်ပေးသော တစ်ခုထဲသော အစီအစဉ်လည်း ဖြစ်ပါသည်။
နှစ်ပေါင်များစွာကြာမှ ရရှိမည့် တိုးတက်အောင်မြင်မှုများကို အချိန် ၃လခွဲ ပါဝင်ရုံဖြင့် ရရှိလိုပါရင် အောက်တွင် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
The Founder Institute သည် အိုင်ဒီယာများထက် တည်ထောင်သူ Founder များကို ဦးစားပေးသော အစီအစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိရဲ့ လုပ်ငန်းကို နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် တည်တံ့အောင် လုပ်ကိုင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေပါက မိတ်ဆွေတို့၏ အကြောင်းအရာများကို နားဆင်လိုပါသည်။ ဝန်ထမ်းလုပ်ကိုင်နေသော Founder များ၊ တစ်ကိုယ်တော် Founder များ၊ အဖွဲ့လိုက် လုပ်ကိုင်နေသူများ ၊ ရင်နှီးမြှုပ်နှံမှုများ ရရှိရန် စီစဉ်နေသော ကုမ္ပဏီများအားလုံး ယခုအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်သည်။
ယခု [semester] အား [app_date] နောက်ဆုံးထား၍ လျှောက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။ လျှောက်လွှာများအား အစဉ်လိုက်အတိုင်း စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် စောစီးစွာတင်ထားသူများသည် ရွေးချယ်ခြင်းခံရရန် ပိုမိုနီးစပ်ပါသည်။
လျှောက်လွာဖြည့်ပြီးလျှင် ကြိုတင်ခန့်မှန်းလက်ခံရေး အကဲဖြတ်ခြင်းအတွက် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင်တန်းတွင် ပါဝင်မည့်သူများကို စီစစ်ရာတွင် အရေးပါပါသည်။
ပါဝင်မည့်သူများကို လက်ခံရေး အဆင့်ဆင့်နှင့် စီစစ်သုံးသပ်ရေး ဖြစ်စဉ်အား လေ့လာလိုပါလျှင်
အခုလင့်(ခ်) သို့သွားရောက် ကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။ FI.co/admissions.
အစီစဉ်အကြောင်း ပိုမိုလေ့လာလိုပါက About ယခု စာမျက်နှာတွင် သွားရောက် လေ့လာနိုင်သည်။
ပထမဆုံးသော ခြေလှမ်းသည် အခက်ခဲဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မို့ ဂုဏ်ယူကြောင်း ပြောပါရစေ။ လုပ်ငန်းစကြစို့ …
10. Application Page 2
[name]၏ လျှောက်လွှာ အဆင့် ၂
မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အောက်တွင် ဖြည့်သွင်းပေးပါ။ The Founder Institute ၏ လက်ခံရေး အဖွဲ့သည် မိတ်ဆွေ၏ အချက်လက်များကို စီစစ်ပြီး လက်ခံရန်အတွက် ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
11. Application Page 3
[name]၏ လျှောက်လွှာ အဆင့် ၃
လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းခြင်း၏ နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်သွင်းပေးပါ။
37. New Founder Application Incomplete
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img height=”1″ width=”1″ src=”https://www.facebook.com/tr?id=576480772563266&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ev=PageView &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;noscript=1″/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;div style=”display:inline;”&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img height=”1″ width=”1″ style=”border-style:none;” alt=”” src=”//www.googleadservices.com/pagead/conversion/842464410/?label=Npn0CKii0HMQmvnbkQM&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;guid=ON&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;script=0″/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt; &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;/div&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
[name]၏ လျှောက်လွှာဖြည့်သွင်းမှု အခြေအနေ မပြီးဆုံးပါ
[name], မိတ်ဆွေ၏ လျှောက်လွှာတွင် အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းရန် ကျန်ရှိနေပါသေးသည်။ လက်ခံရေး အကြောင်းအသေးစိတ်ကို သိရှိလိုပါက, ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်t FI.co/admissions.
Founder Institute သည် တစ်ပတ်လုံးလုံး အမြဲမပြတ်လက်ခံနေသည်ဖြစ်ပြီး ဦးရာလူစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် စောစော စာရင်းသွင်းလျှင် လက်ခံရန် အလားအလာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်
အချိန်အနည်းငယ်ယူပြီး အောက်ပါအကွက်များကို ဖြည့်ပေးပါရန်
38. New Founder Applied
[name]: မိတ်ဆွေ၏ လျှောက်လွှာကို လက်ခံရရှိစမ်းသပ်ပြီး
Founder Institute ကိုလျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ကြိုတင်အကဲဖြတ်အမှတ်လည်း ရရှိပြီးဖြစ်ပြီး လျှောက်လွှာကို စတင်စစ်ဆေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၃-၅ ရက်အတွင်း email ဖြင့် အကြောင်းပြန်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုနေရာတွင်လည်း လာရောက်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
လက်ခံမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ရွေးချယ်မှု အဆင့်ဆင့်တို့ကို သိရှိလိုပါလျှင်, ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် FI.co/admissions.
နည်းပညာကုမ္ပဏီကို ထည်ထောင်လိုသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်ကို သိရှိပါသလား။ Founder Institute သည် ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံနေသောကြောင့် မိမိ၏ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများကို အမြန်ဆုံး ပြောပြလိုက်ပါ
Twitter တွင် share ရန်
Facebook တွင် share ရန်
LinkedIn တွင် share ရန်
သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာ link ကို share ရန် https://fi.co/join
သင်၏ လျှောက်လွှာကို အောက်တွင်ဖေါ်ပြထားပါသည်။ အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
39. New Founder Applied Test
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;lt;img height=”1″ width=”1″ src=”https://www.facebook.com/tr?id=576480772563266&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;ev=PageView &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;noscript=1″/&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;gt;
[name]၏ လျှောက်လွှာအခြေအနေ လျှောက်ပြီး/ မစမ်းသပ်ရသေး
Founder Institute ကို လျှောက်ထားခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် [name]. နောက်ထပ်တဆင့်အနေနှင့် ကြိုတင်အကဲဖြတ် လက်ခံရေးကို ဆောင်ရွက်ပါ။
သင်၏ ရေးသားထားသော လျှောက်လွှာအတွက် အဖြေအပြင် ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အကဲဖြတ်သည် လက်ခံရေးအတွက်အရေးပါပါသည်)။ တစ်နာရီခန့်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိရေးအတွက် အရေးပါသောနေရာတွင် ပါဝင်လျှက်ရှိပါသည်။ အကဲဖြတ်အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာ လိုအပ်မည်မဟုတ်သော်လည်း လက်ခံရေးအဆင့်ဆင့်ကို ထပ်မံပြီး သိရှိလိုပါက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန်
တစ်ပတ်လုံးလုံး အမြဲမပြတ်လက်ခံနေသည်ဖြစ်ပြီး ဦးရာလူစနစ်ဖြစ်သောကြောင့် စောစော စာရင်းသွင်းလျှင် လက်ခံရန် အလားအလာ ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။ ၁၁နာရီ ၅၉ မိနစ်မတိုင်မှီ အချိန်ပေးပြီး အမြန်ဆုံးဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ အကဲဖြတ်အချက်အလက်များကို အောက်ပါနေရာတွင် Login ပြုလုပ်ပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ACCESS: Username နှင့် Password ကို အောက်ပါနေရာတွင် ရိုက်ပါရန်
မှတ်ရန် – Username နှင့် Password သည် မတူညီပါ
http://fndri.com/2vYN0At (English Version)
http://fndri.com/2vTlR3e (French Version)
http://fndri.com/2v9mQJM (Spanish Version)
http://fndri.com/WX6VLX (Russian Version)
http://fndri.com/XkcJxd (Portuguese Version)
http://fndri.com/1aRpWCA (Japanese Version)
http://fndri.com/1od8ROj (Chinese Version)
http://fndri.com/2wpGSDC (Korean Version)
အကဲဖြတ်စာကို တင်ပြီး ၇၂ နာရီအတွင်း ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ လျှောက်လွှာကို အောက်တွင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး အချိန်မရွေး ဝင်ရောက်ပြုပြင်နိုင်ပါသည်။
40. New Founder Event Application
မိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကို စတင်ဖို့ အကူအညီရှာဖွေနေပါသလား။
ဒါဆိုရင် အောက်ပါလျှောက်လွှာကို ဖြည့်လိုက်ပါ Founder Institute – သည် Startup များကို ထည်ထောင်မွေးထုတ်ပေးနေသော ကမ္ဘာကျော် အစီအစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ရုံသာမကပဲ ကနဦးအဆင့် စွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များကို အကောင်းမွန်ဆုံး အထောက်အပံ့ပေးပြီး ခက်ခဲသော လုပ်ဆောင်ချက်များ, နည်းပြများ၏ ပံ့ပိုးကူညီမှု, တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိ ကွန်ရက်, နှင့် အမြဲတန်း ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှု စသည်ဖြင့် လိုအပ်သည်များကို ရရှိမည်ဖြစ်သည်
မိမိအတွက် အကောင်းဆုံး အစီအစဉ်တစ်ခုလား
ကုမ္ပဏီကြီးများမှ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အလျှင်အမြန်တိုးတက်နေသော Startup များသည် Founder Institute ၏ အစီအစဉ်တွင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းအဆင့်မှ လုပ်ငန်းရှင်အဆင့် ထိရောက်ရှိအောင်မြင်ခဲ့ပြီး,သူတို့၏ အိုင်ဒီယာများကို စမ်းသပ်ခြင်း၊ အသင်းအဖွဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ ကနဦးဖောက်သည်များရရှိအောင် ကူညီပေးခြင်း နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမျာရရှိအောင် ကူညီပေးခြင်း တို့အပါအဝင် အကျိုးအမြတ်များစွာကို ရရှိခဲ့ကြပါသည်
မိမိတို့သည် ကောင်းမွန်သော အိုင်ဒီယာများထက် အရည်ချင်းပြည့်မှီသော ထည်ထောင်သူများကိုဦးစားပေးပါသည်။ အကယ်၍ သင်က ခိုင်မာတဲ့ နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုကို ထည်ထောင်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတယ်ဆိုရင် မိတ်တွေတို့နဲ့ တွေ့ဆုံချင်ပါသည်။ အချိန်ပြည့်လုပ်ကိုင်နိုင်ပြီး စိတ်အားထက်သန်တဲ့ တည်ထောင်သူများ၊ အဖွဲ့များ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ရရှိကာစ လုပ်ငန်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။
စိတ်ပါဝင်စားတယ်ဆိုရင် ယခုပြုလုပ်မည့် [city] ၏ အောက်ပါအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာမြင့်မည်ဖြစ်ပြီး ပွဲများကို အခမဲ့ တက်ရောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည် ထပ်မံသိရှိလိုပါက ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် Admissions or About page